सरकारले वास्तविक किसानलाई चिन्नै सकेन - Radio Simrik || 96.5 Mhz
सरकारले वास्तविक किसानलाई चिन्नै सकेन
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ १३, २०७५ समय: १७:३१:२८
सरकारले वास्तविक किसानलाई अझैपनि चिन्न नसकेको किसानले गुनासो गरिरहेका छन् । यतिबेला सरकारले हरेक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ । तर वास्तविक किसान को हो भनेर चिन्न नसक्ता सरकारी बजेटको सही सदुपयोग भएको पाइदैन ।
नगरले चालु अवस्थामा पनि कृषिका लागि भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् त्यस्ता कार्यक्रममा वास्तविक किसानलाई समावेश गराउन नसकेको गोठ कृषि फर्मका सञ्चालक भोला प्रसाद खरेलले बताए । गोठ कृषि फार्म पथरीशनिश्चरे ३ खरेलचोक, मोरङमा रहेको छ । गोठ कृषि फार्ममा नगरकै पहिलो अर्गानिक सागसब्जी उत्पादन हुने गरेको छ । यदि नगरपालिकाले अर्गानिक नगर बनाउन चहेमा १ वर्षमा पथरीशनिश्चरेलाई पुग्ने गरिको अर्गानिक तरकारी उत्पादन गर्न सक्ने खरेलले बताए । उनले भने “राज्यले हामी जस्ता किसानका लागि त केही गरेकै छैन् । यदि नगरलाई अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिने हो भने म १ वर्षमा नगरलाई विषादी मुक्त बनाउन सक्छु तर नगरले अर्गानिकलाई जोड दिनुपर्यो नी, यहाँ हुने कृषि तालिमहरुमा जस्को कृषि बालि नै छैन उहि पुगेर भत्ता थापेर हिड्छ खैत किसानलाई सहाभागी गराको ? नगरले सही किसान चिन्न नसक्दा अहिले भएको व्यवसाय छाडेर विदेशीन थालेका छन् यसमा ध्यान दिनुपर्दैन ?”
गोठ कृषिमा के के उत्पादन हुन्छ ?
गोठ कृषि फार्ममा जुकीनि जातको फर्सी अहिले पनि फलिरहेको छ । झट्ट हेर्दा काक्राँ जस्तो देखिने लाम्चो खालको हरियो फर्सी छ । यसको बोटपनि लामो लहरा नहुने आलुको बोट जस्तो सानो पोथ्रा हुने र त्यसमै माटोमाथि नै फर्सी फल्ने रहेछ । यो फर्सी गोठ कृषि फार्ममा ४ कठ्ठामा रहेको छ । यसको बीउ प्रति बियाँ ६ रुपैया सम्म पर्ने गरेको फार्म सञ्चालक खरेलले बताए । यो फर्सी रोपेको ६ दिनमा टिप्नका लागि तयार हुन्छ । उत्पादनका लागि करिब १५ हजार खर्च भएको र खर्च कटाएर १५ हजार जति नाफा हुने खरेलको भनाइ छ । यो फर्सीमा कुनैपनि प्रकारको विषादीको प्रयोग गरिएको छैन् । यो पूर्ण रुपमा अर्गानिक उत्पादन भएको खरेलले बताए ।
खरेलले ३ कठ्ठामा टमाटर खेती गरेका छन् । श्रीजना र सरिता जातको टमाटरको उत्पादन निकै राम्रो रहेको छ । यसको बोट अग्लो हुने र प्रत्येक हाँगामा झुप्पा लाग्ने गर्दछ । ३ कठ्ठामा खेती गर्नका लागि खरेलले करिब २० हजार खर्च गरेको बताए । एक सिजनमा टमाटरले पनि खर्च कटाएर १० देखि १५ हजार सम्म नाफा दिने गरेको छ ।
टमाटरको बोट अग्लो हुने भएकाले यसको फेदमा अन्य साग सब्जी पनि लगाउन सकिने रहेछ । एक छिमलको धनिया उत्पादन भइसकेको छ । यसमा तोरीको साग, मुला लगाएतका साना, होचा जातका साग सब्जी पनि उत्पादन हुन्छ । अहिले मुला सकेर धनिया पनि अन्तिम चरणमा रहेको खरेलले बताए । मुला, साग, धनिया लगाएतले टमाटर बारीबाट नै थप आम्दानी दिनेगरेको छ ।
खरेलले नामधारी खुर्सानी लगाएका छन् । नामधारीमा प्रति कठ्ठा ५ हजार खर्च हुन्छ यसले सिजन अनुसारको आम्दानी दिने गरेको छ । बजार भाउ राम्रै आएमा १० अजार सम्म नाफा दिने गरेको खरेलले बताए । यसको अलवा भिन्डी, लौका, बैगुन लगाएतका तरकारीहरु पनि उत्पादन हुने गरेको छ ।
खरेलले तरकारी बारीमा आफैले उत्पादन गरेको मलको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । तरकारीका लागि आवश्यक पर्ने मलका लागि खाडी बनाएर जैविक मल उत्पादन गर्ने गरेका छन् । तरकारी बालीलाई अर्गानिक बनाउनका लागि जैविक मलको प्रयोग, विषादीको सट्टामा किरा मार्नका लागि चरालाई चारो लगाइदिने र चराले तरकारीमा लाग्ने किरा फट्याङ्ग्रा पनि खाने गरेको खरेल बताउछन् । खरेलले भने “हामी किरा मार्नका लागि बरु चरालाई चारो हालेर खान बोलाउछौँ । चराले चारोसंगै किरा नि खान्छ, माकुराको जालो बनाउने प्रयत्न गछौँ यसो भएमा केही किराहरु माकुराको जालमा अल्झने वातावरण हुन्छ । हामीले जैविक विविधतालाई पनि कायम राख्न पर्छ भन्ने उद्देश्य लिएका छौँ ।”
गोठ कृषि फार्ममा बाख्रा पनि पालिएको छ । हाल गोठमा ३५ वटा बाख्रा रहेका छन् । जसमा १५ वटा खसी बोका छन् भने २० वटा चाँही माउ र पाठापाठी रहेका छन् । बाख्राका लागि खरेलले सुरुमा नै ८ लाख लगानी गरेको बताए । बाख्रा पालनका लागि आवश्यक पर्ने खोर, दिनमा बाँध्नका लागि टाट्नाको व्यवस्था लगाएतका संरचनामा वढि खर्च लागेको छ । अहिले सम्ममा लगानीको २० प्रतिसत चाँही फाइदा गर्न सकेको खरेलको भनाइ छ ।
बोयरमा भन्दा लोकलमा वढि फाइदा
पछिल्लो समय बोयर जातको बाख्रामा वढि मात्रामा फाइदा हुनेगरेको सुन्न पाइन्छ तर खरेलले भने लोकल जातमा नश्ल सुधार गरेर पाल्दा बढि फाइदा हुने बताए । उनले खरी र बोयर जातको मिश्रणबाट नश्ल सुधार गरेर बाख्रा पालिरहेको बताए । खरेलले भने “बाख्रामा चाँही नश्ल सुधार गर्नुपर्छ । बोयर जातको बाख्रा पाल्नका लागि सामान्य किसानले बाख्रा किन्ने सक्दैनन् अनि ठुलो लगानी गरेर बोयर भनेर ल्यायो फाइदा हुदैँन । हामीले थोरै पैसा हुनेले पाल्ने भनेको नश्ल सुधार गरेर हो फेरी हाम्रो नरा नै स्थानीय जातको चैँ सरक्षण गर्नु पनि छ ।” गोठ कृषि फार्मको नारा नै “मानव स्वास्थ्य माटो र पर्यावरण जोगाउन रसायनिक मल विषादी मुक्त जैविक खेती गरौँ, स्थानीय जातलाई नश्ल सुधार गरी बाख्रा पालनमा आम्दानी बढाऔँ”
गोठ कृषि फार्ममा बाख्राको पिसाब, बड्कौँला सबै जम्मा गरेर राख्ने र कसैले खोजेमा सस्तो दरमा विक्रि गर्ने गरेका छन् । यसरी जम्मा गरेको मलमूत्रलाई जैविक विधिबाट सुद्धिकरण गर्ने र बोटविरुवाको अवस्था हेरेर पानीको मात्रा मिलाएर प्रयोग गर्ने गरेको खरेलले बताए । सामान्यतया बाख्राको मलमूत्रलाई जम्मा गरेर अमृत झोल तयार गर्ने गरेको खरेलको भनाइ छ । यसरी तयार भएको अमृत झोललाई प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएको तरकारी लामो समय सम्म टिक्ने, स्वादिलो हुने, स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा फाइदाजनक रहेको खरेलले बताए । गोठ कृषि फार्ममा झापा देखिका किसानहरु पनि सिक्नका लागि आउने गरेको उनले बताए । वरीपरिका केही किसानहरुले पनि आफुसंग भएको आइडिया लिने र अर्गानिक उत्पादनमा लाग्ने गरेको खरेलले बताए ।
गोठमा माछा पालन पनि रहेको छ । जम्मा ३ कठ्ठामा २ वटा पोखरी खनेर माछा पालन सुरु गरिएको छ । एउटामा कार्प र अर्कोमा मुंग्री जातका माछा रहेका छन् । पहिलो वर्ष पोखरीको राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण माछामा फाइदा नभएको खरेलले बताए । माछामा लागि पोखरी र भुरा गरेर १ लाख ७० हजार लगानी रहेको खरेलको भनाइ छ ।
सरकारले किसानलाई अनुदान भनेर जतिसुकै कराएपनि वास्तविक किसानले नपाएकामा खरेलले आक्रोस पोखे । उनले भने “सरकारी अनुदान त कहाँ जान्छ कहाँ थाहा छैन् । हामीले यत्रो लगानी गरेर काम गरिरहेका छौँ, अनुदानका लागि पटक पटक जिल्ला कृषि देखि कहाँ कहाँ धाएनौँ तर पार लागेन । यहाँ त अनुदान खानका लागि फार्म दर्ता गरेर बसेको गिरोह नै छ उनिहरुलाई खोरमा बाख्रा हाल्नु पर्दैन फार्म दर्ता भए पुग्छ अनि आम किसानका नाममा गैर किसानले अनुदानको रकम पचाएका छन् । खै सरकारी निकाय के हेरेर अनुदान दिन्छ ? किसानको घरघरमा गएर फार्ममा गाइ बाख्रा छन् की छैन्न भनेर कहिले अनुगमन गरेर दिने गरेको पाइदैन । यहाँ त आफ्ना आसेपासेले फार्म दर्ता गरे मिलाएर खाए भइराखेको छ ।”
यसरी अर्गानिक तरकारीबाली उत्पादन गरेर १ वर्षमा नगरलाई नै पु¥याउछु भनेर भनिरहदाँ सरकारी निकायले यसमा ध्यान दिनु जरुरी देखिएको छ । साँचिकै अनुदानमा गैर किसानले पाएका कुरा यसअघि पनि पटक पटक आएका छन् । साँचिकै किसानका लागि लगानी गर्ने वातावरण सरकारी निकाएको बन्नु पर्दछ । यस अघि पनि धेरैवटा फार्म बन्द भएका कुराहरु आएका छन् ।
गोठ कृषि फार्मकै छेउमा आर के पी बंगुर फार्म थियो तर १ वर्ष देखि त्यो पनि बन्द भएको छ । बजारको ग्यारेन्टी नहुँदा, लगानीको सुरक्षितता नहुने जस्ता विविध कारणले फार्म बन्द गर्नुपरेको संचालक रामकाजी बस्नेतले बताए । उनले भने “बंगुर लगेर अघियामा कटिदेउन भन्दा पनि मान्छे पाइन । मेरो २,३ लाख रुपैया खेर गयो ।” सरकारले किसानको लगानीको सुरक्षितताको ग्यारेन्टि गर्न सकेमा नेपाल पूर्ण रुपमा कृषिमा आत्म निर्भर हुन सक्ने केही उदाहरणहरुले देखाइसकेका छन् । यसका सरकारी क्षेत्रको ध्यान जानु जरुरी छ ।